Ukukholelwa kwe-Tenrikyo ekuphandeleni ubomi obonwabisayo
I-New Movement Religious Movement Centered Around Giving
I-Tenrikyo inkolo yonqulo oluvela kwiJapan. Umgaqo-siseko owenzayo uzama kwaye uwamkela i-state eyaziwa ngokuba yi-Joyous Life. Oku kukholelwa ukuba yindawo yokuqala kunye nenjongo yoluntu. Eyilwe ngenkulungwane ye-19, ngokuqhelekileyo kuthathwa njengenyango entsha yenkolo .
Abalandeli baka-Tenrikyo bachaza ubuqaqawuli babo njengoThixo uMzali, enegama elithi Tenri-O-no-Mikoto.
Imifanekiso yomzali igxininisa uthando oluthixo onabantwana bakhe (ubuntu). Kwakhona kugxininisa isimo somntakwabo bonke abantu abanalo.
U-Tenrikyo wasungulwa ngu-Oyasama owazalelwa uMiki Nakayama. Ngowe-1838, wayesityhilwa kwaye kuthiwa ingqondo yakhe yatshintshwa nguThixo uMzali.
Ngaloo ndlela, amazwi akhe nezenzo zakhe zazingamazwi nezenzo zikaThixo uMzali kwaye wayekwazi ukufundisa abanye indlela yokulandela i-Joyous Life. Wahlala kuloo mmandla iminyaka emashumi amahlanu ngaphambi kokufa eneminyaka engamashumi asithoba.
U-Oyasama wabhala "I- Ofudesaki, i-Tip ye-Brush Writing ." Ingumxholo oyintloko wokomoya we-Tenrikyo. Kukholelwa ukuba 'uya kuthatha ibrashi yakhe yokubhala' naliphi na xa uThixo uMzali wayenomyalezo wokuthumela ngaye. Umthamo ubhaliwe kwiindawo ezili-1711 ezisetyenziswe ngokubanzi kwivesi.
Efana ne-haiku, i-waka ibhaliwe kwipateni yesilayidi.
Esikhundleni se-haiku ye-line-line, i-5-7-5 ye-syllable formula, i-waka ibhaliwe kwimigangatho emihlanu kwaye isebenzise iphethini yesi-syllable yesi-5-7-5-7. Kuthiwa kuthiwa iindidi ezimbini kuphela kwi " Ofudesaki " azisebenzisi.
Umbutho kunye neShinto
U-Tenrikyo wayekho, njengexesha elithile, elibizwa ngokuba yihlelo lamaShinto eJapan. Oku kwakuyimfuneko ngenxa yobudlelwane phakathi koorhulumente nenkolo eJapan ukwenzela ukuba abalandeli abatshutshiswa ngenxa yeenkolelo zabo.
Xa isimiso seSizwe saseShinto sichithwa emva kweMfazwe Yehlabathi II, u-Tenrikyo waphinda waqatshelwa njengecawa elizimeleyo. Ngelo xesha, amaninzi amanqweno eBuddhist naseShinto asuswe. Iyaqhubeka ukusebenzisa iindlela ezininzi ezichaphazela ngokucacileyo inkcubeko yaseJapan.
Izenzo Zemihla ngemihla
Iingcamango ezizimeleyo zibhekwa ngokuphambene noJoyous Life. Baphuphuthekisa abantu ukuba bafanele baziphathe njani kwaye banandiphe ubomi.
I-Hinikishin isenzo esingenabugovu nesokubonga onokubonisa kubanye abantu. Oku kunceda ukucima iingcamango ezizimeleyo ngenkqubela ukubamba uthando lukaThixo uMzali ngokuncedwa kwamanye amalungu oluntu.
Ububele kunye nobubele sele kube ngumsebenzi phakathi kwabalandeli baka-Tenrikyo. Ukuphuhliswa kwazo kweenkedama kunye nezikolo eziziimfama zaphawulwa ngelixa zihlangene neShinto. Lo mqondo wokupha kunye nokuphuculwa kwehlabathi kuqhubeka namhlanje. Uninzi lwezobugcisa be-Tenrikyo lenze izibhedlele, izikolo, iinkedama, kwaye ziye zazingundoqo kwiinkqubo zoncedo lweentlekele.
Abalandeli bayakhuthazwa ukuba bahlale benethemba ekujonganeni nobunzima, baqhubeke bezama phambili ngaphandle kwesikhalazo okanye isigwebo. Kwakhona akuqhelekanga kulabo abalandela i-Tenrikyo ukuba babambe amaBuddha okanye iinkolelo zamaKristu.
Namhlanje, i-Tenrikyo inabalandeli abangaphezu kwezigidi ezimbini. Uninzi luhlala eJapane, nangona lusasazeka kwaye kukho iintlanganiso kulo lonke elaseMpuma Asia kwakunye ne-United States neChanada.
Iimpawu zeBuddha - Iimfihlelo zabafileyo